Rotisserie चिकन (Rotisserie वा ओभन) कसरी बनाउने - Pennies संग खर्च - व्यंजनहरु
लुन्ड्री डिटर्जेंटको साथ कसरी घर बनाउने फेब्रिज बनाउने
कहिले सम्म ग्रिल चिकन fajitas
ढिलो कुकर म्याक र ह्यामसँग चीज
गोमांस शोरबाको लागि कुखुराको ब्रोथको विकल्प लिनुहोस्
इजि रोटिसरी चिकन रेसिपी
यो रसदार रोटीसेरी कुखुराको पकाउन सकिन्छ
ओभनमा वा रोटिसरीमा !
यो कोमल, रसदार, र हरेक पटक स्वादले भरिएको छ! यसको कुखुराको खानाको रूपमा रमाईलो गर्नुहोस् वा यसलाई थप्न प्रयोग गर्नुहोस् क्यासरोलहरू , स्यान्डविच, सलाद , वा सूपहरू!
पत्नी सेभर मकरोनी र चीज पकाउने
रसदार सबै-उद्देश्य कुखुरा
जब कुखुरा यो रसीला र स्वादिष्ट हुन्छ बायाँ पछाडिको भाग जस्तो देखिँदैन, तिनीहरूलाई अनगिनत तरिकामा प्रयोग गर्न सकिन्छ!
तपाईं यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ ओभनमा वा रोटिसरीमा । सिजन यो जसो तपाइँलाई मनपर्दछ, या त केवल नुन र मरिच संग वा तल रोटेसरि कुखुरा मसला पकाउने नुस्खा संग।
यसलाई सलादको शीर्षमा सार्नुहोस्, यसलाई A मा परिवर्तन गर्नुहोस् कुखुरा स्यान्डविच , यसलाईaमा प्रयोग गर्नुहोस् कुखुरा चाउचाउ सूप , वा यसलाई बनाउनुहोस् कुखुरा भाँडा पाई । सम्भावनाहरू अनन्त छन्!
तपाई यसलाई तीन महीना सम्म स्थिर गर्न सक्नुहुनेछ हातमा सँधै रसदार कुखुरा पाउँदा जबसम्म कुनै नुस्खाले कल गर्दछ।
कसरी अण्डाहरू संग मटर सलाद बनाउन
सामग्री र भिन्नताहरू
चिकन यो नुस्खा को लागी, हामी पूरै कुखुरा प्रयोग गर्छौं! यदि तपाईंको रोटिसरी ठूलो छ भने तपाईं टर्कीको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, वा यो नुस्खा पनि कोर्निश कुखुराको साथ राम्रो स्वाद हुनेछ!
जैतुन तेल हामी स्वाद मन पराउँछौं कि जैतुनको तेल कुखुरामा छाडिन्छ तर तपाईं हातमा भएको कुनै पनि तेल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तेल थपेमा छालाको थप कुरकुरा हुन्छ।
SEASONINGS यस रेसिपीमा सिसनिंग प्रयास गर्नुहोस्, ए घरेलु कुखुराको मसाला , वा तपाइँको मनपर्ने भण्डार खरिद मसला!
कसरी बदाम बटर फज ब्राउनिज बनाउने
Rotisserie चिकन कसरी बनाउने
म एक रोटिसरीमा रोटीसरी चिकन बनाउँछु (मेरो बिजुली एक हो) तर यदि तपाईंसँग छैन भने तपाईं यसलाई भट्टीमा बनाउने बनाउन सक्नुहुन्छ भुनी कुखुरा । जबकि यो प्राविधिक रूपमा रोटिसरी कुखुरा होईन यदि ओभनमा बेक गरिएको छ, यसको स्वाद एकदम मिल्दोजुल्दो छ!
कुखुरा तयार गर्न:
मसला मिसाई र एकै साथ मिलाउनुहोस्।
कुखुरा सुक्खा र प्याला तेल जैतून तेल र मसाला मिश्रण संग मल्ला।
कुखुराको पछाडि पखेटा झुकाउनुहोस् र खुट्टाहरू सँगै टाँस्नुहोस्।
ओभन रोस्ट गर्न:
भुसुने पनमा यो नुस्खा बनाउनको लागि:
१२ मिनेटको लागि ° at० ° एफमा भुनाउनुहोस्, त्यसपछि drop 350० डिग्री फ्रिमा तल झार्नुहोस् र अर्को 60०- 70० मिनेटमा भुनिनुहोस्।
ओभनबाट हटाउनुहोस् र रसमा छाप लगाउन कुखुरालाई १० मिनेट आराम गर्न दिनुहोस्।
यो नुस्खा ए मा बनाउनको लागि रोटिसरी ओभन , वाaमा रोटिसरी संलग्नक तपाईको ग्रिल को लागी:
कुण्ड प्रति १ound-२२ मिनेटमा कुक गर्नुहोस् (यो तपाईले प्रयोग गर्ने रोटीसेरीको प्रकारमा भिन्न हुनेछ) कुखुरा आन्तरिक रूपमा १ 165 ° एफ सम्म नपुग्दासम्म।
तातो बन्द र कुखुरा अर्को १ minutes मिनेट 'क्यारीओभर कुक' जारी राख्न दिनुहोस्।
एक पटक रोटिसरी (वा ओभन) बाट हटाएपछि कुखुरा कम से कम १० मिनेट आराममा नमीमा राख्न दिनुहोस्।
Rotisserie चिकन काट्न कसरी
तपाई जस्तो रोटिसरी चिकन काट्नुहोस् टर्की कोर ।
खुट्टा वरिपरि स्ट्रि Remove हटाउनुहोस् र शरीरबाट पखेटा खोल्नुहोस्।
शरीरमा जोडिएको खुट्टा / फिलाको जोर्नीबाट काट्ने पेरि। चक्कु प्रयोग गर्दै। खुट्टा जांघबाट अलग गर्नुहोस्, यदि चाहानुहुन्छ। पखेटा सजीलो शरीर बाट टाढा गर्न सकिन्छ।
एउटा तेज शेफ चक्कुको प्रयोग गरेर, केन्द्रबाट स्लाइसहरू काट्नुहोस् जहाँ ब्रेस्टबोन प्रत्येक बाँया र दायाँ तिर छ।
टुक्रा वा सलाद वा र्‍याप, स्यान्डविच, वा सूपको लागि बिच्छीको रूपमा सेवा दिनुहोस्!
Rotisserie कुखुरा पहिल्यै पकाइएको छ र सामान्य मा चाँडै नै प्रयोग गरिन्छ सबै विभिन्न तरीकाले यो सेवा गर्न सकिन्छ!
यसको लागि प्रयोग गर्नुहोस् कुखुराको सलाद स्यान्डविच , र्‍याप, र अधिक! यसलाई एक फ्रिजमा छाप गरिएको कन्टेनरमा वा zippered झोलामा एक हप्ताको लागि राख्नुहोस्।
बाँकी रहेको पनि हुन सक्छ स्थिर ! Zippered झोला लेबल गर्नुहोस् र यसले लगभग months महिना राख्नेछ!
खानाको लागि कुखुरा!
चिकन अला राजा - बाँकी कुखुराको लागि उत्तम
सजिलो चिकन रोल अप - एक महान खाजा वा खाना
कोका कोला चिकन - निविदा र रसिलो हरेक समय
चीसी चिकन क्यासरोल - उत्तम सजिलो क्यासरोल
ब्रोकली चिकन रोल-अप - सजिलो मलाईदार lasagna रोलहरू
के तपाईलाई यो सजिलो रोटीसीरी चिकन मन पर्‍यो? निश्चित गर्नुहोस् रेटिंग र कमेन्ट तल छोड्नुहोस्!
१ कप बिना पकाएको चामलले कति जनालाई पुर्‍याउँछ
Rotisserie चिकन रेसिपी
तयारी समयपन्ध्र मिनेट कुक समय१ घण्टा १२ मिनेट विश्राम समयपन्ध्र मिनेट कुल समय१ घण्टा २ मिनेट सर्भिंगहरू। सर्विंग्स लेखकहोली निल्सन ओभन वा रोटिसरी ओभनमा बनेको परिणामले पूर्ण रूपमा रसिलो, चिसो, र खस्ता कुखुराको परिणाम हुन्छ! प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢१ सानो फ्रियर कुखुरा 3.5lbs को बारेमा
▢१ चम्चा जैतुनको तेल
▢१/२ चम्मच पेपरिका
▢१/4 चम्मच धूम्रपान पेपरिका
▢१/२ चम्मच लसुन पाउडर
▢१/२ चम्मच प्याज पाउडर
एउटा सानो भाँडामा सबै मौसमी जोड्नुहोस् र राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्।
कुखुराको मासु तयार गर्न, कागज तौंलीको साथ ड्राब ड्राई।
मसलाको मिश्रणको साथ जैतूनको तेल र मौसम सित्तैंमा कुखुराको बाहिरी भागमा रगड्नुहोस्।
बिस्तारै कुखुराको पखेटा पछाडि तह लगाउनुहोस्। भान्साको सुतलो प्रयोग गरेर खुट्टा एकसाथ बाँध्नुहोस्।
He50० ° एफ मा प्रीहीट ओभन। क्यास्टेरोन स्किलेटमा वा सानो डिशमा कुखुराको छाती माथि राख्नुहोस्।
१२ मिनेट भुनिनुहोस्, तातोलाई ° 350० ° एफ मा कम गर्नुहोस् र थप -०-70० मिनेट पकाउनुहोस् वा कुखुरा १°5 ° एफ सम्म नपुग्दासम्म।
नक्काशी गर्नु भन्दा पहिले १ minutes मिनेट आराम गर्नुहोस्।
एक Rotisserie मा कुक गर्न
एक मा कुखुरा केन्द्र रोटिसरी थूक । यदि ग्रिल रोटिसेरी प्रयोग गर्दैछ भने, मध्यम तापमा hehe० ° एफ।
कुखुरा १ 18-२२ मिनेट प्रति पाउन्ड कुक गर्नुहोस्, कुखुरा १ 16 16 ° एफ सम्म नपुगुञ्जेल। (L.०lb कुखुरा को बारे मा 60०-80० मिनेट को लागी आवाश्यक हुन्छ)।
एकचोटि कुखुरा सही तापक्रममा पुगेपछि, आँच बन्द गर्नुहोस् र कुखुराको ताप १ 15 मिनेटसम्म घुमाउन दिनुहोस्।
रोटिसरीबाट हटाउनुहोस् र सेवा गर्नुहोस्।
कुखुरा कुनै पनि मसला मिश्रणको साथ मौसम गर्न सकिन्छ। तपाईं एक पटकमा एक भन्दा बढी कुखुरा पकाउन सक्नुहुन्छ, कुखुराले छोएनन् भनेर निश्चित गर्नुहोस्।
नोट: माउन्टिंग दिशाहरूको लागि तपाईंको सटीक रोट्सेरी उपकरणहरूको लागि निर्देशनहरू पढ्नुहोस्।
इलेक्ट्रिक रोटिसरी मेशिनहरू preheating आवश्यक छैन। टाइम्स कुखुरा, विधि प्रयोग र रोटिसरीको प्रकारको आधारमा भिन्न हुनेछ। प्राय: साना आकारको कुखुराहरू लगभग एक घण्टामा पकाउनेछ। उत्तम नतीजाहरूको लागि, तत्काल पढ्ने थर्मामीटर प्रयोग गर्नुहोस् र कुखुरा १ 165 ° एफ सम्म नपुगुञ्जेल खाना बनाउनुहोस्।
क्यालोरिज:२२२,कार्बोहाइड्रेट:१g,प्रोटिन:१g,मोटो:१g,पागलिएको बोसो:।g,कोलेस्ट्रॉल:१मिलीग्राम,सोडियम:67मिलीग्राम,पोटासियम:१०मिलीग्राम,फाइबर:१g,चिनी:१g,भिटामिन ए:२२6IU,भिटामिन सी:दुईमिलीग्राम,क्यालसियम:१०मिलीग्राम,फलाम:१मिलीग्राम
कीवर्डसजिलो रोटिसरी कुखुराको नुस्खा, कसरी रोटिसरी कुखुरा, रोटिसरी कुखुरा बनाउने कोर्सचिकन, मुख्य पाठ्यक्रम पकाइयोअमेरिकी© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सामाजिक मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।